Iindaba - i-CNC lathe processing processing isisiseko seempawu
CNC lathe processing lokusila iimpawu ezisisiseko
I-CNC lathe processing processing isisiseko:
Amandla okusila aphezulu. Ivili lokugaya malunga nomsebenzi wokujikeleza ngesantya esiphezulu, ihlala ifikelela kwisantya sevili35m / s, malunga namaxesha angama-20 ngesixhobo esiqhelekileyo, umatshini unokufumana inqanaba lokususa isinyithi ngaphezulu. Ngophuhliso lokusila ubuchwepheshe obutsha, amandla okusila enza inkqubela phambili, kwezinye iinkqubo zithathe indawo yokujika, ukugaya, ukucwangcisa, ngokuthe ngqo ekusebenzeni okungalunganga.
I-2.Ingakwazi ukufumana ukunyamezelana okuphezulu kokuchaneka kunye noburhabaxa bomgangatho ophantsi kakhulu. Ngqolowa nganye esika ingqweqwe yokusika i-chip layer icekeceke kakhulu, ihlala inee-microns ezininzi, ke imbonakalo inokufumana ukuchaneka okuphezulu kunye noburhabaxa bomhlaba obuphantsi. Ngokwesiqhelo ichanekile ukuya kwi-IT6 ~ IT7, uburhabaxa bomhlaba bufikelela ku -08-0.051xm; Ukuchaneka kokuchaneka okuphezulu kunokufezekiswa ngaphezulu.
Ukusika amandla amakhulu, ukusebenzisa amandla kakhulu kuninzi. Ivili lokugaya lenziwe ngamanqanaba amabi e-CNC, ukuhanjiswa kweenkozo ezirhabaxa kwivili lokusila kunesiphithiphithi, ukusika ikakhulu kwi-engile engeyiyo (-15 '- 85'), kwaye incam inesangqa esithile seArc radius, kwaye ke ukusika amandla kukhulu, ukuchitha amandla ngomatshini kuninzi.
Uluhlu 4.Wideprocessing. Ukugaya ivili elirhabaxa kukuqina okuphezulu, ukuzinza kwe-thermal, kungekuphela nje kunokuqhubekeka ngentsimbi engeyiyo eyomeleleyo, intsimbi yentsimbi kunye nezinyithi ezingenazintsimbi kunye nezinye izinto, kodwa kananjalo nokuqhubekeka kwesinyithi esomeleleyo, zonke iintlobo zezixhobo zokusika kunye nezixhobo zomatshini onzima njengaphezulu izinto zobulukhuni.
5.Ukuguquguquka okuphezulu. Ukutshintshwa kwesoftware yesicelo kunokutshintshwa ngokulula kuluhlu oluthile ukusuka kulungiso lwesahlulo esinye ukuya ekuqhubekekeni kwelinye icandelo, elinciphisa kakhulu uhlengahlengiso lwezixhobo kunye nexesha lokulungiselela imveliso.
6.Gqibezela ukusebenza komatshini kunye nenkqubo yokuzenzekelayo.
I-Wuxi Lead Precision Machinery Co., Ltd inikezela abathengi bazo zonke iisayizi ukugqibezela ngeenkonzo zesinyithi zesinyithi kunye neenkqubo ezizodwa.